Hamropahuch – Online News Portal
२० जनाको क्षमता रहेको कारागारमा ५४ जनालाई कोचाकोच
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले कर्मचारी माग गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनपद समूहतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान पदहरूमा २ हजार ९१७ जना कर्मचारी माग गरेको हो। पहिले माग गरेको संख्यामा यस दिन थप…
प्रत्यक्ष प्रशारण : रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्राबारे घोषणा कार्यक्रम ||LIVE||
जाजरकोटको जिसस प्रमुखमा खत्री र उपप्रमुखमा सिंह निर्वाचित
जाजरकोट । जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटको प्रमुखमा कालीबहादुर खत्री निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका खत्रीको एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै, उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दलबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन् । बुधबार भएको निर्वाचनमा ११ मत प्राप्त गर्दै सिंह निर्वाचित भएका…
कुशे गाउँपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ काे मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित)
नलगाड नगरपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ काे मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित)
छेडागाड नगरपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ काे मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित )
जुनीचाँदे गाउँपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ केा मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित)
बारेकाेट गाउँपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ काे मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित)
भेरी नगरपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ काे मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित)
शिवालय गाउँपालिका निर्वाचन नतिजा २०७९ काे मत परिणाम हेर्नुहाेस् ( निर्वाचित सहित)
भेरी नगरकार्यपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका २ रोकायगाउँका ५२ वर्षीय वीरे कामीलाई भेट्न दिनहुँ कुनै न कुनै दलका नेताहरू आइरहन्छन् । सानै उमेरदेखि…
जाजरकोट । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले कालीकोटको नौ वटै पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ । विप्लवका केन्द्रीय सदस्यदेखि पूर्व…
सामुदायिक विद्यालयको १४ करोड बेरुजु
कालीकोट । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा रु १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका…
जाजरकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जिल्लाबाटै ई–पासपोर्ट अर्थात विद्युतीय राहदानी बनाउन सुरु गरेको छ । सर्वसाधरणलाई सहज र छिटोका…
अमर सुनार दैलेख । नारायण नगरपालिका वडा नं. ११ ले गर्ने हरेक कार्यक्रमहरुको बिनियोजित बजेट जानकारी गराएर मात्र कार्यक्रम सुरुवात…
नारायण नगरपालिका–१ को पहिलो निर्णय वडा भित्र कसैको मृत्यु भएमा १५ हजार सहयोग दिने
दैलेख । दैलेखको नारायण नगरपालिका ०१ वडा कार्यालयले पहिलो निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो वैठकले वडा भित्र बसोबास…
नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुवेदीद्वारा तलबभत्ता नलिने घोषणा
दैलेख । दैलेखको नौमुले गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष छविराम सुवेदीले आफुले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता कुनै नलिने घोषणा गरेका छन । आफुले…
दैलेखको ११ ओटै पालिकाको मतगणना सकियो, काँग्रेस ५, एमाले ४ र माओवादी केन्द्र २ पालिका प्रमुखमा विजयी
दैलेख । दैलेखका सबै पालिकाको मतगणना सकिएको छ । ११ ओटा स्थानिय तह रहेको दैलेखमा नेपाली काँग्रेसले ५ पालिका प्रमुखमा…
माबि कोटखोलाकाे भबन उद्घाटन
हुम बहादुर कार्की सुर्खेत । गोर्खा वेलफेयर ट्रस को आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा र जन ज्ञान भण्डार माद्यामिक विद्यालय कोटखोलाको…
कुलेन्द्र शाही सुर्खेत । ‘मानवताको लागि योग’ भन्ने नाराका साथ सुर्खेतको भेरीगंगामा निशुल्क योग शिविर सञ्चालन गरिएको छ । ७…
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विगतकै बाटो अँगालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा…
कुलेन्द्र शाही सुर्खेत । आर्थिक समृिद्धको आधार, लघु उद्यम मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत मेसिनबाट ७ दिने दुना टपरी बनाउने सीप…
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरु तस्विर : हाम्रो पहुँच जाजरकोट । जिल्ला कारागार जाजरकोटमा क्षमता भन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएपछि समस्या…
जाजरकोट । जाजरकोटमा सञ्चालित तेह्रौं राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको उपाधी भेरी नगरपालिकाले जितेको छ । नगरपालिकाको भेरी त्रिवेणी माद्यामिक विद्यालय रिम्नामा…
जाजरकोट । जाजरकोट खलंगाको रातो दरवार प्रांङ्गणमा कविता वाचन प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाली साहित्यका आदिकवि तथा राष्ट्रिय विभुति…
जाजरकोट । जिल्ला कारागारका कैदी÷बन्दी सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला अदालतको आयोजनामा ‘न्यायमा सबैको पहुँच’ सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक…
पाइलट गुमाएको रुकुमले एक महिना नबित्दै इन्जिनियर गुमायो
रुकुम पश्चिम । सुर्खेत दैलेख सडक खण्डको कपासे नजिकै बोलेरो जिप दुर्घटनामा परेको छ । बा झ ८७८४ नम्बरको बोलेरो…
पारिश्रमिक माग गर्दै पत्रकारहरु आन्दोलित
रुकुम पश्चिम । पारिश्रमिक नपाएको भन्दै केही पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका ९ राडीबजारमा संचालित रेडियो…
रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमका रवि केसी ३२ वर्षका भए । उनी यही उमेरमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।…
रुकुम पश्चिम जिसस प्रमुखमा जनार्दन शर्माकी बहिनी निर्विरोध
रूकुम । रुकुम पश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लै जिल्ला समन्वय समिती गठन गरेको छ। ६ मध्ये चार पालिका जितेको माओवादीले…
सल्यानी गायक रामु विरही केसीको ‘पुछुतो’ सार्वजनिक ( भिडियो सहित)
सल्यान । सल्यानी लोक तथा दोहरी गायक रामु विरही केसीको ‘पुछुतो’ गीत सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार Chapi Online T.V…
सल्यानमा बस दुर्घटना : १० जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
सल्यान । सल्यानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १० जना घाइते भएका छन् । एक जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ…
सल्यान । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका २ राजागिठीमा कांग्रेसका कार्यकर्ता ३७ वर्षीय खिमबहादुर पुनलाई कुटपिट गरेको आरोपमा एमालेका पाँच जना कार्यकर्तालाई…
सल्यानमा विजयी उत्सव मनाउन आउँदै गरेकाे गाडीमा करेन्ट लागेर २ जनाकाे मृत्यु
सल्यान । सल्यानमा विजयी उत्सव मनाउन आउँदै गरेकाे गाडीमा करेन्ट लागेर २ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने १० जना बढी…
हुम्ला । हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको एक विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएका ठूलो सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई ठेउला (चिकेन फक्स) रोग देखिएको आशङ्का…
हुम्ला । बच्चा जन्माएपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएकी एक सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । अत्यधिक रक्तश्राव भएर समस्यामा परेकी चंखेली…
हुम्लाको चङ्खेलीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार शाही विजयी
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार प्यारीलाल शाही विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका प्रेमकला शाही विजयी भएकी छन्।…
हुम्लाकी रंगमति शाही बनिन् पहिलो महिला वडाध्यक्ष
हुम्ला । हुम्ला खर्पुनाथ गाउँपालिका–४ मा नेपाली काँग्रेसबाट वडा अध्यक्षकी उम्मेदवार रंगमति शाही निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । उनी निर्वाचितमात्रै…
मुगु । मुगुमा यस वर्ष मात्रै ९१ जना बालबालिकामा कडा प्रकृतिको कुपोषण देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनाएका छन् । गत वर्ष २…
File Photo मुगु । डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा दुई महिनादेखि एउटा सिकारी कुकुर थुनामा छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ चितैका…
जिसस मुगुको प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेस निर्विरोध
मुगु । जिल्ला समन्वय समिति मुगुको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख पदमा कांग्रेसका…
मुगुमा यार्साबाट ३१ लाख राजश्व
File Photo मुगु । मुगुमा यार्सा संकलनबाट मात्रै यस वर्ष ३१ लाख ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।…
डोल्पाका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा संकलनको लागि अनुमति नदिँदै पाटनमा संकलन सुरु भएको खुलासा भएको छ। जेठ ११ गते मात्र…
डोल्पाको मुड्केचुलामा माओवादीका शाही विजयी
डाेल्पा । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दत्त बहादुर शाही विजयी भएको छन । माओवादी केन्द्रका दत्त बहादुर…
माओवादीले डोल्पाबाट खाता खोल्यो, जगदुल्लामा नारासिंह विजयी
डोल्पा । माओवादीले डोल्पाबाट स्थानीय तहमा खाता खोलेको छ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन्…
नेतालाई डोल्पावासीको प्रश्न, हामीलाई चुनावमा मात्र सम्झिने हो ?
पाँच वर्षअघिको चुनावपछि अनुहार नदेखाएका नेता आइतवार घरआँगनमै देख्दा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका कालिकाका जयबहादुर शाही दंग परे । फोन गर्दा…
जुम्ला । जुम्लामा जिल्लास्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी शुरु भएको छ। जुम्लाका कृषकले उत्पादन गरेका विभिन्न कृषिजन्य उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिएको हो।…
जुम्ला । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर १० बोहोरागाउँमा रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुर्वेदिक औषधि नै नभएको पाइएको छ।…
जुम्ला । जुम्लामा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका पशुपक्षीको लागि राहात वितरण गरिने भएको छ । सोमबार जिल्ला स्तरीय राहात वितरण…
जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्न जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य
जुम्ला । कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्न जाँदा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य हेर्ने गरिएको छ । बालविवाह रोक्नका लागि…
जाजरकोट । जाजरकोट खलंगाको रातो दरवार प्रांङ्गणमा कविता वाचन प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाली साहित्यका आदिकवि तथा राष्ट्रिय विभुति भानुभक्त आचार्यको २०९ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा असार २९ गते…
मुक्तक: रात साक्षी छन्
दश गजलकारका उत्कृष्ठ दश गजल
कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक चलचित्र कार्यशाला हुने भएको छ । चलचित्र बोर्डको सहयोग र केबी इन्टरटेनमेन्ट एण्ड ग्रुप प्रालिको आयोजनामा यही असार १० देखि १७ गतेसम्म सुर्खेतमा चलचित्र कार्यशाला हुन लागेको हो । प्रालिले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चलचित्र…
अब २२ स्थानीय तहको मतपरिणामा आउन बाँकी
जाजरकोटी गायिका गीता चनाराको ‘लभ गरेको खर्च’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी प्रदेश १ का खेलाडीलाई सम्मान गरिँदैछ । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले ओलम्पिक, एसियन र साफ गेममा सहभागी खेलाडीलाइ आइतबार सम्मान गर्न लागेको हो। विराटनगर एयरपोर्ट रोडमा…
आईसीसीले हटायो क्यानमाथिको सबै प्रतिबन्ध
हेमन्त केसी सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ठुला आयोजना लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजना भन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उदेश्यका साथ निर्मम भएर हामीले ठुलो बजेट ठुला आयोजना तीर केन्द्रीत गरेको…
छेडागाड नगरपालिकाको बजेट ६९ करोड ६८ लाख ८७ हजार ( पूर्णपाठसहित)
छेडागाड । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९ ÷८० का लागि ६९ करोड ६८ लाख ८७ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबारको नगर सभामा उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले उक्त वजेट पेश गरेका हुन् । पूर्णपाठ…
शक्ति र ऊर्जा बचत गर्न बङ्गलादेशमा बेलुका ८ बजेपछि बजार बन्द गर्न सरकारको निर्देशन
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरु तस्विर : हाम्रो पहुँच जाजरकोट । जिल्ला कारागार जाजरकोटमा क्षमता भन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएपछि समस्या देखिएको छ । १५ जना पुरुष र ५ जना महिलाको…
कुशे गाउँपालिकाको बजेट ४९ करोड १६ लाख २० हजार,के मा कति बजेट ?
नलगाड नगरपालिकाको १० औं नगर सभा उद्धघाटन गर्न पुगे पूर्व गृहमन्त्री बस्नेत (फाेटाे फिचर)
नलगाड नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई विधुर भत्ता दिने
Files Photo प्रेम विश्वकर्मा जाजरकोट । भेरी नगरपालिका ११ जगतिपुरमा रहेको शिव शंकर माद्यामिक विद्यालय जगतिपुरमा रहेको विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोग विहिन अवस्थामा छ । विद्यालयमा प्रयोगशाला भएपनि प्रयोगमा भने नआएको हो । साविकको गाउँ विकास समिति हुदाँ बखत नै गाउँ…
ट्वीटरमाथि १९ अर्ब जरिवाना: प्रयोगकर्ताका डाटा बेचेको आरोप
काठमाडौं । प्रयोगकर्ताका डाटाहरुको गैरकानूनी प्रयोग गरेको अभियोगमा ट्वीटरमाथि झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । अमेरिकाको संघीय वाणिज्य आयोग र कानून मन्त्रालयका अनुसार नियामक निकायहरुसँगको सहमतिको ट्वीटरले उल्लंघन गरेकाले ट्वीटरमाथि १५ करोड डलर जरिवाना भएको हो । ट्वीटरले…